Amacandelo, i-steroids ye-Bentley Descartes-Geofumadas
Matshi, 2012 Okufumaneka, ezintsha, Microstation-Bentley
I-Descartes yi-Bentley yemveliso elinganayo (inxalenye) ukuya kwi-Raster Design eyenziwa kwi-AutoDesk. Ngokuqhelekileyo into eyona nto ibalulekileyo ephakanyisiwe kude kube yile unyango lwezithombe, nangona kuninzi kunikezela, ndiyakhumbula ndithe ndathetha ngethuba elithile malunga nokudala Idata yemifanekiso esuka kwimidwebo ecatshulwayo kunye nalo ukuhlanganiswa kwemifanekiso kunye neepolgoni zokucoca.
Kodwa u-Bentley ufuna ukuthatha le software eyongezelelweyo ngesihloko se-avant-garde kakhulu: ilifu lamafu, umbandela apho bebexinzelele khona kunyaka ophelileyo, ukuya kuthi ga kwinkomfa yokugqibela eAmsterdam basebenzise ibinzana elinomfuziselo "iiSteroids zePort Descartes" .
Makhe sibone izicwangciso ezibini ezibonakala ziphawulekayo kuloo mzamo yi-I-models kunye yazo buyela kwi talente.
Ukuthengwa kwePointools Ltd
Le nkampani eyenza enye yeyona mveliso ephezulu kakhulu ekulawuleni amafu. Nangona isisitsha esincinane, sakhula ngendlela emangalisayo ngenxa yokuvuleka kwayo ukusebenza kunye nezixhobo eziphambili kunye nabenzi beprojekthi ngexesha elifanayo.
Ingxenye yokukhula kwayo yafezekiswa ngePointools Suite, ithuluzi elikhangayo kakhulu ekulawuleni idatha kunye nobuchule obumangalisayo, imfuneko ebalulekileyo kule fayile apho amawaka eedatha ayengathethiweyo kodwa izigidi. Izixhobo ezisisiseko zaba zikhangeleke kakhulu, kwimicimbi efana nokucoca izithintelo ezingadingekile, ukucoca ngokucokisekileyo kunye nokukhutshwa kweempawu eziphezulu.
Ezinye zaphunyezwa ngeVortex equka i-API engekho iBentley kuphela kodwa i-AutoDesk, iRhinino, i-Sketchup, iCheck, i-Leica, i-Topcon kunye nezinye idibeneyo. Mhlawumbi eyona nto ikhangelekile yayikufunyaniswa, okuye kwongezwa ukuhlanganiswa kweefayile kunye nomxholo osisityebi okwenzeke kakhulu.
Ukukhangela italente yabantu
Kodwa kukho okungaphezulu kwesona sixhobo esikhulu seBentley ukucinga ngale nto. I-buchopho ezimbini emva Pointools zaye ngobuchule ilandelwe, omnye Joe Croser, lowo uMlawuli of International Marketing for Bentley phakathi 2005 kunye 2010, ixesha waya ukuba inkampani 300 500 kwizigidi.
Croser wemka Bentley va 2010 ukuya 2011 njengoko uSekela Mongameli Pointools isicwangciso sokukhula umthondo kwemarike okunyuke intengiso enye 90% yaye yaphakamisa ixabiso lemveliso ngo 50% yada yaphela xa isenzo sakhe zoomantyi nge kuthengwa kwenkampani ngeBentley Systems kwi-2011. Ngoku uCroser unenkampani yakhe: i-Oundle Group, apho wathatha uLarry Reagan, omnye owayengumBentley kwaye bazinikezele kwizinto abazi ukuba bangayenza: uncedo lweenkampani zikhula.
Olunye uhlobo olusemva kokukhula kwamaPointoli lwaluyiFaraz Ravi, umsunguli kunye no-CEO malunga ne-10 iminyaka emva kokuthenga kwakhe waba nguMlawuli weemveliso ngaphakathi kwe-Bentley Systems.
Ngexa uBentley engazange aqhubeke noJoe Croser Bentley, intuition isitshela ukuba waqhubeka ebona amandla akhe. Wamkela ukusebenzisana ukusebenza kunye ukuze iBentley idibanise i-Vortex API kwaye ekugqibeleni ithenge imveliso epheleleyo kuquka inkampani. Oku kuthiwa ukuqonda ukuba i talente ayifinyeleleki kodwa asiyiyo imveliso yayo.
Kwimeko kaFaraz Ravi, nje iintsuku ezimbalwa ezedlule uye wadibaniswa njengoSihlalo weKomiti yeSizwe ye-Imaging Systems i-3D eyaziwa ngokuthi yi-ASTM, apho imigangatho yale ngxelo iveliswa. Ukubeka eso siqendu kuloo ndawo kuya kuthetha ukuba ezininzi iinzame zokusebenzisana eziye zaphunyezwa kunye nePointools ziya kwamkelwa ngokwemigangatho yalo mgca, okwenzekayo ngokungenakunyaniseki kunye nokudibanisa ngokuthe ngcembe kunye nokuqonda okude.
Ngoko nge-Series Series 3 esinazo i-Descartes ezingaphaya kwe-raster data processing idibanisa ukudala, ukuhlela, ukuququzelela kunye nokwenza imodeli yamafu.
Ngengqiqo yomsebenzi we-Microstation. Umzekelo ungakhetha ezimbini zeengqungquthela zeendawo, usebenzisa ucingo olufakela izithintelo, uze udibanise ubuso bomfanekiso we-3D yento, uze ululale ukuba kunyanzelekile ukuba udlulisele kwinxalenye yobuso obukhoyo Inesimo esingavumelekanga. Emva koko yenza iqhosha elifanelekileyo ukuze uliguqule libe yinto yokubuyiswa kwakhona.
Ngokusebenza kakuhle kweqonga leV8i elivumela ukunikezelwa kweenkcukacha ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo ixesha elide, isizathu esikhokelela ekuthembekeni okukhulu kwiinkampani ezinkulu zobunjineli kunye nezokwakheka apho iBentley ihlelwe kakuhle.
Ngokubandakanywa kweePoinol functionalities ezingasayi kubizwa ngokuba yiScartes steroids.
Siza kubona ukuba uphathe ukubeka nangaphezu kumazwe aphuhlileyo apho umzekelo izixeko smart nokulatyuza umdla, kodwa kumazwe zethu bazakucotha phantsi kuqala imiba esisiseko yentsimi geospatial nalapho imizamo emininzi yalahleka ubuthathaka bethu imisebenzi yokuphatha kunye nombono omncinci wamagosa kwizikhundla ezigqibeleleyo.
Funda kabanzi malunga neBentley Descartes.
Post edlulileyo«Edlulileyo Icandelo le-geospatial: Iziphumo zovavanyo lomsebenzi
Post Next Into eyenzeka kweli bali: Yintoni Entsha AutoCAD 2013 ngokubhekiselele kwezinye iinguquleloOkulandelayo "